Izimayini - Newsway Valve Co., Ltd.
Izimayini zibhekisela ekukhishweni kwamaminerali avela ngokwemvelo njengama-solid (njengamalahle namaminerali), uketshezi (njengowoyela ongahluziwe) noma amagesi (njengegesi yemvelo). Kubandakanya ukumba phansi komhlaba noma ngenhla komhlaba, ukusebenza kwezimayini, nawo wonke umsebenzi osizayo, njengokugaya, ukuhlomula nokwelashwa, okuvame ukwenziwa eduze kwesiza semayini noma isiza ukucubungula izinto zokusetshenziswa, yimisebenzi yalolu hlobo.
I-NEWSWAY VALVE inikeza izixazululo embonini yezimayini izosiza ekuthuthukiseni ukuphepha kwemvelo, izimo zokusebenza kwamapayipi enqubo, isisekelo sendawo nempilo yesevisi ye-valve, futhi kunciphise isikhathi sokuphumula esidalwa ukulungiswa.
I-NEWSWAY valve inganikeza izimboni zezinsimbi nezamaminerali izinsiza ezinzima zebhola lensimbi ezihleliwe ezimelana nezindawo ezisebenza kakhulu. Amaphayiphu ethu e-autoclave abe nempumelelo eyenziwe ngokugcwele ekusetshenzisweni kwepayipi slurry emhlabeni wonke.
Main Izicelo emakethe:
Ukuxhashazwa Kwemayini Yensimbi Nokuncibilikisa
Ukuxhashazwa Kwemayini ye-Aluminium kanye Nokucubungula
Ukuxhashazwa Nokuqhutshwa Kwemayini yeNickel
Ukusetshenziswa Kwemayini Yethusi Nokucubungula
Imikhiqizo Ebandakanyekayo Eyinhloko:
Metal Uhlezi Ball Valve
Ojwayelekile Cast Steel Gate Valve